फिल्म छाड्ने स्टार कि गर्ने ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsफिल्म छाड्ने स्टार कि गर्ने ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कुनै पनि कलाकारले सिनेमामा काम गर्दा त्यसलाई स्टार मान्ने कि छाड्दा ? एउटाले छाडेको फिल्म अर्कोले हेर्दा उसलाई किन कमजोर मानिन्छ ? किन हेपेरे बोलिन्छ ?
अहिले नेपाली सिनेमामा यस्तै देखिएको छ । सिनेमा छाड्दा आफू स्टार भएको महशुश गर्ने एकातिर छन् भने त्यो सिनेमा आफ्नो हातमा ल्याएर उसलाई देखाइदिएको ठान्ने अर्कोतिर छन् ।
यसैले अहिले नाम चलेका कलाकारमै फिल्म छाड्ने र गर्ने तछाडमछाड देखिएको छ ।
अभिनेता आकाश श्रेष्ठले मुहुर्तमा समेत उपस्थित भएर गर्ने पक्का भएको सिनेमा विर विक्रम २ छाडे । उनले यो सिनेमा छाड्नुको कारण हजुरबुबाको स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण दिएका थिए । तर, उनले यो सिनेमा छाडे लगतै पूजा शर्मासँग सम्हालिन्छ कहिले मनमा काम गर्न तयार भए ।
यो सिनेमाको आइतबार घोषणा भएको छ । आकाशले सिनेमा छाडेको भोलीपल्टै अर्का स्टार कलाकार पल शाहले सिनेमा गरे । सिनेमाको छायांकन पनि लगभग सकिएको छ ।
पलले आकाशले छाडेको फिल्म गरेको भनेर चर्चा भयो । आकाशले छाडेपछि कसै न कसैले त गर्नैपर्छ । पलले फिल्म गर्दा आकाश भन्दा उनी कमजोर भएको चर्चा भएको थियो ।
अभिनेता अनमोल केसीले ब्याचलर बन्टी सिनेमा छाडे । यो सिनेमाका लागि उनले आधा बर्ष समय लिए र अन्तिममा छाडिदिए । अनमोलले सिनेमा छाडेपछि अब यो सिनेमा कसले गर्छ भन्ने तय भएको छैन । निर्देशक मिलन चाम्सले पनि अब यो सिनेमा नगर्ने बताइसकेका छन् ।
सिनेमाका निर्माता सुदिप खड्काले अभिनेता प्रदिप खड्कासँग कुरा अगाडि बढाइसकेका छन् । सुदिपले प्रदिपले सिनेमा गरेको खण्डमा सोलीडोली नाम राखेर सिनेमा बनाउने आश्वासन प्रदिपलाई दिएका छन् ।
प्रदिप खड्काको भागमा अनमोलले छाडेका फिल्म धेरै परेका छन् । तर, एउटाले छाड्दा अर्कोले सिनेमा त गर्नैपर्छ ।
नेपालमा अहिले सिनेमामा काम गर्छु भनेर पक्का गरिसकेर छाड्दा स्टार भएको भान कलाकारमा हुन थालेको छ । अर्कोतिर, कुनै कलाकारले छाडेको सिनेमा आफूले गर्छु भनेर निर्मातासँग नजिक हुने कलाकारको संख्या पनि बढेको छ ।
केही कलाकार काम नै नपाएर बसेको अवस्था छ । औलामा गन्न सकिने आधा दर्जन कलाकारको हातमा भने सिनेमाको कुनै अभाव छैन । उनीहरुलाई दैनिक एउटा सिनेमाको अफर आइरहेको छ ।
तर, कलाकारले काम गर्छु भनेर पक्का गरेको सिनेमा छाड्दा व्यवसायिकता देखिदैन । तर, एउटा कलाकारले छाडेको सिनेमा अर्कोले गर्दा उसको काम गर्ने तरिका र व्यवसायिकता माथि नै प्रश्न सोझाउनु पनि सही शैली होइन ।